YEYINTNGE(CANADA): Thursday, July 21
21 July 2011 Yeyintnge's Diary.doc
520K View Download
21 July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
21 July 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/21/20110အကြံပြုခြင်း
မိမိကိုယ်ကို မြန်မာစစ်ရာဇဝတ်ကောင် အဖြစ် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည့် ဦးထူးထူးဟန်(Photo:: http://1.bp.blogspot.com)
‘‘ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ၂၄ ယောက် မကဘူးထင်တယ်၊ ၂၄ ယောက် ကျော်တယ်။ မှတ်မိတဲ့လူပေါ့။ ကျနော် နာမည်သိတဲ့ လူ၊ မြို့နယ်သိတဲ့လူ။ တကယ်တမ်း သတ်ခဲ့တာတော့ ၂၄ ယောက်ထက် မကဘူးပေါ့နော်။ သာကေတ ဟိုဘက် တံတားထိပ်၊ ဒီဘက်တံတားထိပ်မှာ ကျနော်တို့ တပ်မ ၇၇ နှစ်ခု ရှိတယ်။ ဒီဘက်မှာ ကျနော်တို့က MI-6 လျှို့ဝှက်ရုံး ထားထားတာလေ။ အဲဒီမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပစ်သတ်တယ်။ ပစ်သတ်ပြီးတော့ ကျနော့်ရဲဘော်တွေကပဲ အလောင်းတွေကို မီးရှို့ပြီးတော့ ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲ ပစ်ချတယ်။ အလောင်းဖျောက်တာပေါ့ဗျာ”
‘‘ကျနော်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AAP မှာ ပေးထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ကော်ပီးယူလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ကျနော် သတ်ထားတဲ့ လူတွေရဲ့ မြို့နယ်တွေ၊ နာမည်တွေနဲ့ အသက်ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာတွေလည်း ပါတယ်။ နာမည်တွေကတော့ ဗမာလိုပဲ ကျနော် ရေးပေးထားပါတယ်။ ခင်ဗျား ပြန်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့။ သာကေတတို့ ဘာတို့၊ ကြို့ပင်ကောက်တို့ အကုန်ပါတယ်’’
‘‘လူငယ်တွေပေါ့ဗျာ၊ ကျောင်းသားတွေပေါ့။ ပြီးတော့ နောက်ကနေ မာစတာမိုင်းလုပ်တဲ့ သူတွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေ ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ် ဘက်ကနေ ဝင်လာပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေကို မြှောက်ပေးတဲ့ လူတွေလည်း ပါတယ်။ အစုံပေါ့ဗျာ နော်။ ကျနော်ပြောတာ ၂ဝ ကျော်ထဲ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ၁ဝဝ ကျော်တယ်ဗျ။ ကျနော် အမိန့်ပေးပြီးလို့ ကျနော့်အမိန့်နဲ့ သေသွားရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ကျနော် ကယ်လိုက်တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက ကျနော့် ရပ်ကွက်ထဲက သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့စာရင်းတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ လမ်းအတူတူ၊ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေရဲ့ သားသမီးတွေ၊ သူတို့မိဘတွေကို ကျနော်သိတော့ တချို့လူတွေကျတော့ လွှတ်ပေးတယ်လေ။ တချို့ကျတော့ ကျနော် သတ်ပစ်တယ်။ တချို့ကိုကျတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မသတ်ဘူး။ ကျနော် အမိန့် ပေးလိုက်တာပေါ့။ ကျနော်က ကျောင်းသားတွေ ထဲမှာလည်း ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာကိုး။ ကိုမိုးသီးတို့နဲ့ အတူတူလုပ်နေတာကိုး။ ၈၈ တုန်းက MI-6 ကနေ ကျနော်က တာဝန်ယူတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကနေတဆင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေကနေ သတင်းတွေကို ကျနော်က MI-6 ကို ပေးတယ်ပေါ့နော်’’
‘‘9mm နဲ့ပေါ့။ အဲဒီခေတ်က အရာရှိတွေကို ပေးထားတာကတော့ 9mm ၂ ခုရှိတယ်။ အတိုရှိတယ်၊ အရှည်ရှိတယ်။ ၉ မမ အတိုပေါ့။ အဲဒီဟာနဲ့ပဲ ကျနော်က ပစ်သတ်တာ။ သူတို့ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတော့ နောက်ကနေ ပစ်တာ၊
သေမှန်းတောင် မသိဘူး။ နောက်ကနေ ပစ်တာဆိုတော့ နာကျင်မှု မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ သူတို့ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့လည်း မထောက်ဘူး။ အဝေးကနေ ပစ်တာ။ အဲဒီနေရာမှာ ပွဲချင်းပြီးပါပဲ”
‘‘သူတို့နောက်ကနေ ပစ်တာလေ။ သူတို့ခေါင်းကို သေနတ်ကြီးနဲ့ ထိလိုက် တေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ခံစားရမယ်။ တပေ အကွာလောက်ကနေ ပစ်တာပေါ့။ ၆ လက်မအကွာ၊ တပေ အကွာလောက်ကနေ ပစ်တာပေါ့။ သူတို့ကို မခံစားရအောင်ပေါ့နော်’’
‘‘ကျနော့်ကို အမိန့်ပေးတာကတော့ .. အင်း .. ဒါက ကျနော့်အကြောင်းကို ပြောပြတာလေ။ အခု ကျနော်တို့ ဘက်မှာလည်း ကျနော် အပါအဝင် ၉ ဦး ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ MI6က လူတွေ ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ ရောက်လာတာ။ အဲလိုမျိုးဆိုတော့ ကျနော်က သူများတွေကိစ္စ မပြောချင်တော့ဘူး။ ကျနော့်အရာရှိတွေ၊ ကျနော့် တပည့်တွေအကြောင်း မပြောချင်တော့ဘူး။ ကျနော့်အကြောင်းပဲ ပြောချင်တယ်။ အမိန့်ဆိုတာက အထက်က လာတာပဲ။ အဲဒီအချိန်က ကျနော်အလုပ်နှစ်ခု လုပ်နေရတဲ့အတွက် အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ တနေ့ကို ၄ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်၊ ၃ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်။ ဦးနှောက် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မရဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အရမ်းရှုတ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာလည်း ကျနော်က အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး’’
‘‘တောင်ဥက္ကလာပဆိုတာက ဒီလိုဗျာ့။ ကျနော်က အသက်လိမ်ထားတော့ ကျနော် ၁၈ နှစ်ပေါ့။ DSA မှာ ခုနှစ်တောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျနော်က ၆၇ မှာမွေးတာ ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားဟာ ခင်ဗျား ပေါင်းကြည့်တော့။ ကျနော်က သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကြာခဲ့ပြီ။ နှစ် ၂ဝ ကျော်ခဲ့ပြီ’’
‘‘ကျနော့်ဆီမှာ တယောက်ရှိတယ်။ Queensland မှာ၊ နောက် Western မှာ တယောက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မဲလ်ဘုန်းမှာ ၄ ယောက် ရှိတယ်။ ဆစ်ဒနီမှာ ၂ ယောက် ရှိတယ်။ ကျနော်အပါအဝင် ၉ ယောက်ပေါ့နော်။ ဒီမှာရှိတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးက ကျောင်းသားဘက်ကနေ လာတာတွေ။ တချို့ကျတော့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီး သတင်းစာ ကျနော်တောင် မေ့နေပြီး.. အဲဒီသတင်းစာမှာ လုပ်လာခဲ့တာ။ လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ကျနော့်ရဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက် ပါတယ်။ ကျနော် နာမည် မသုံးချင်တော့ဘူး’’
‘‘ကျနော်က ထောင်လည်း ကျခဲ့ဖူးတာကိုး။ ထောင်ထဲမှာကတည်းက ကျနော်က တဖြည်းဖြည်း စိတ်ဓာတ်က
ပြောင်းလာပြီ။တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ ကိုယ်က ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ သွားခဲ့တော့ အရေးအခင်းတခုထဲတင် မဟုတ်ဘူး။ တချို့ကျောင်းသားတွေကျတော့ တကယ့်ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြတာ။ အဲဒီလိုတွေ
မြင်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ချင်းစာလာတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ၃ နှစ်ကျော်နေခဲ့တော့ ထောင်ထဲမှာလည်း ကျနော်က
နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေ လေ့လာခဲ့တယ်လေ’’ ထောင်ထဲမှာကတည်းက စိတ်ကပြောင်းလာတဲ့ သဘောပေါ့။”
‘‘ပြောင်းလာတယ်ဗျာ။ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ထောင်က ထွက်လာပြီးတော့ ကျနော် တောင်းဆိုတယ်။ ကျနော့်ကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်က ထောင်ထဲမှာ အရိုက်ခံရတာကိုး။ ကျနော် MI6မှာ လုပ်နေတာကို ထောင်က အရာရှိတွေကို ပေးမသိဘူး။ ပေးမသိတော့ ကျနော့်ကို ကျောင်းသားပဲ ထင်တာပေါ့။
ကျောင်းသား ဆန္ဒပြတဲ့အထဲ ကျနော်လည်း ပါတော့ ပိတ်ရိုက်ခံရတာပေါ့။ ကျနော့်ကို VIP သဘောမျိုး မထားထားဘူး။ ထောင်ကထွက်လာတော့ ကျနော်က အရမ်းနစ်နာတော့ နစ်နာကြေး တောင်းလို့ ရတာပေါ့ဗျာ။ ထွက်လို့တောင် မရဘူး’’
‘‘ကျနော့်ဆီမှာ တယောက်ရှိတယ်။ Queensland မှာ၊ နောက် Western မှာ တယောက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မဲလ်ဘုန်းမှာ ၄ ယောက် ရှိတယ်။ ဆစ်ဒနီမှာ ၂ ယောက် ရှိတယ်။ ကျနော်အပါအဝင် ၉ ယောက်ပေါ့နော်။ ဒီမှာရှိတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးက ကျောင်းသားဘက်ကနေ လာတာတွေ။ တချို့ကျတော့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီး သတင်းစာ ကျနော်တောင် မေ့နေပြီး.. အဲဒီသတင်းစာမှာ လုပ်လာခဲ့တာ။ လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ကျနော့်ရဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက် ပါတယ်။ ကျနော် နာမည် မသုံးချင်တော့ဘူး’’
‘‘မပါဘူး ခင်ဗျာ့။ ကျနော်အကြီးဆုံးပဲ။ သူတို့ကို ကျနော်မေးကြည့်တယ်။ ကျနော် သွားမယ်၊ သတင်းထောက်တွေနဲ့ စကားပြောတော့မယ် ဆိုပြီးတော့’’
‘‘မတူဘူး၊ မတူဘူး။ သူတို့က စီးပွားရေးအရ အရမ်းအောင်မြင်နေကြပြီ၊ အိမ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့။ အခု ၂ ယောက် ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ဒီနေ့မှ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူတို့က ကျနော်နဲ့ တွဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့။ တယောက်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲနေပြီး၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပေါ့။ သူလည်း လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ဒီမတရား လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ၊ ကျနော့်လိုပေါ့။ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်တယ်ပေါ့’’
‘‘ဥပဒေတွေဘာတွေ ကျနော် နားမလည်ဘူးလေ။ ကျနော်က မစဉ်းစားဘူး။ ကျနော့်မှာလည်း ဒီမှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့။ ကလေး ၃ ယောက် ရနေပြီလေ။ ဒီမှာ ရတာ။ မိန်းမကိုလည်း ဒီမှာတွေ့တာ။ လာတုန်းကတော့ တယောက်ထဲလာတာ။ ကျနော့်မှာ ကလေးငယ်ငယ်ရှိတယ်။ နောက်တခု ပြန်စဉ်းစားတာက ကျနော်တယောက်ထဲ ကျနော့်မိန်းမနဲ့ အခု စကားမပြောဘာမပြော စိတ်ဆိုးတာပေါ့။ ကျနော့်မိန်းမကိုလည်း ကျနော် ဒီအတွင်းရေးကို မပြောပြခင် ကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ကျနော်က ပြောပြခဲ့တာ’
‘‘ကျနော့် ဖုန်းလိုင်းတွေ ဘာတွေကို အကုန်လုံး သူတို့ နားထောင်နေတယ်။ အဲဒီလောက်ကိုတော့ သိတာပေါ့။ ကျနော်လည်း ထောက်လှမ်းရေးက လာတာပဲ။ သူတို့ မပိုင်သေးတော့ ကျနော့်ကို ဖမ်းလို့ မရသေးဘူးဆိုတာ။ ကျနော် ဝန်ခံထားတာပဲ။ ဝန်ခံထားပေမယ့် ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေက မတူဘူးဗျ။ ဝန်ခံတိုင်းလည်း အရေးယူလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ထင်ချင်ထင်မယ်။ လိမ်ပြောတာလား။ ကျနော်က အရင်က နာမည်ကြီးတာကိုး”
‘‘ဒီသြစတြေးလျမှာ။ ကမ်ပိန်းတွေ၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေက ကျနော့်လက်ထက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ။ ၂ဝဝ၃ မှာ တနိုင်ငံလုံးကို ခြေကျင်းကြီး ခတ်ပြီးတော့ တနိုင်ငံလုံးကို လျှောက်ခဲ့တာ၊ လူပေါင်း တသိန်းကျော်။ အဲဒါကို Documentary တောင် ရိုက်ထားတယ်။ အဲဒီတော့မှ နောက်မှ အမေရိကတို့ ဘာတို့ စပြီး အော်တာ။ ထိုင်းတို့
အော်တယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ Kevin Rudd ရော အကုန်လုံးက စိတ်မကောင်း ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ မယုံကြဘူးပေါ့’’
Kevin Rudd က စိတ်မကောင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ကကော ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲ။
‘‘ဒီနေ့ ပြောသွားတယ်လေ။ တီဗီချန်နယ်ထဲမှာ ပြောသွား
တယ်။ ကျနော့်ကိစ္စကိ်ု သူ လေးလေးနက်နက် စုံစမ်းမယ်
ပေါ့နော်။ ကျနော်နဲ့ သူနဲ့ တွေ့တဲ့ ပုံတွေကိုပါ ထည့်ရိုက်
ထားတယ်။ ဒုဝန်ကြီးချုပ်က ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့
ကျနော့်ကို ICC ပို့ဖို့အတွက် လုပ်တယ်။ ဥပဒေက မရှိ
ပြန်ဘူး။ ကျနော်က ဒီ ၂ဝဝ၂ နောက်ပိုင်း ကျူးလွန်ခဲ့တာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂ဝဝ၂ မှာ ဥပဒေသစ် လုပ်ထားတယ်။
ကျနော်က ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အကျုံး မဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က လူတွေကို သတ်ခဲ့ပေမယ့် ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီး သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ သေသွားအောင် မခံစားရအောင် သတ်ခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့။ ကျနော့်ကို ICC ပဲ ပို့ပို့၊ ဘယ်ပဲပို့ပို့၊
သေဒဏ်ဘဲ ပေးပေး၊ ဗမာပြည်ပဲ ပြန်ပို့ပို့ ကျနော့်အနေနဲ့က ရယ်ဒီဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ခံရမှာဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပြီးသွားပြီ။
“အား….ကျနော့်မိဘရယ်၊ ကျနော့်မိန်းမရယ် တဦးတည်း မျက်ရည်ကျနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဗမာပြည်မှာ ရှိတဲ့ မြောက်များစွာသော မိဘတွေ မျက်ရည်ကျနေတာ။ သားသမီးတွေ ပျောက်ဆုံးတယ်။ ထောင်တွေထဲမှာ ရှိသလိုလို၊ နယ်စပ်တွေမှာ ရှိသလိုလို။ အဲဒီတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ ကျနော်သတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒါတွေဟာ အိမ်ပြန် မရောက်လာနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။ ဘီင်္ဘီစီကနေ လွှင့်ခဲ့တယ်။ ကျနော်
တောင်းပန်တယ်။ ကျနော့်မှာ အပြစ်ရှိတယ်။ လူတွေကိုလည်း လွှတ်ပေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ကျနော် မလွှတ်ပေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်းငယ်တယ်။ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ အလုပ်နှစ်ခုကို လုပ်နေရချိန်ဆိုတော့”
“အကသမှာလည်း ကိုမိုးသီးဇွန်တို့နဲ့အတူ လုပ်နေတာလေ။ ကိုမိုးသီးဆိုရင် ကျနော့်ကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ကျနော့်ကို မသိတဲ့လူ မရှိဘူးနော် အရေးအခင်းမှာ။ အိုးဝေအောင်တို့၊ ရဲတေဇတို့ဘာတို့ အခုအမေရိကမှာ ရှိပါတယ် ဒီကောင်တွေ။ ကျနော်နဲ့ အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေ”
“သုံးရက်တော့ကြာပြီ အခု ရဲက မဖမ်းသေးဘူးဆိုတော့ တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ အခုမှ ဇာတ်လမ်းက စတာနော်။ ကျနော့်မှာလည်း အကြံတခု ရှိတယ်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ နောက်မှ ပြောလို့ရမယ်။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတာ။ Just begin. Not finished yet. People think this is going to be finished, you know. ကျနော် ထောင်ထဲ ရောက်သွားတာနဲ့ ကျနော့်ကို အပြစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ မပြီးဘူးဗျ။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတာ ကျနော် အဲတာကို ပြောလို့မရဘူး။ ကျနော်လုပ်ရတာလည်း အကြောင်းတော့ရှိတယ်ဗျာ။ အဲဒီအကြောင်းကို ပြောပြပိုင်ခွင့်မရှိဘူး”
ရောက်လာပြီဆိုတော့ ကမ္ဘာ့မီဒီယာရဲ့ အားနဲ့ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ သမ္မတတွေ၊ နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲတွေအားလုံး ကျနော့်အကြောင်းကို သူတို့ ကြည့်မယ်လေ။ ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ပြောချင်တာကို ပြောလို့ရပြီလေ”
“နိုင်ငံတိုင်းမှာက ကျောင်းသား အတော်များများ အတွေးအခေါ်တွေ နောက်ဆုတ် ကုန်ကြတယ်။ စစ်အစိုးရကို
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အော်လာတယ်။ ဘာမှ မပြောင်းလဲဘူး၊ သံရုံးတွေမှာ သွားအော် ဆန္ဒတွေပြ အခမ်းအနားတွေ လုပ်။ အချိန်တွေကုန်။ အလုပ်တွေပျက်၊ ငွေတွေကုန်ပြီးတော့ မီဒီယာမှာမပါ ဘာမှမပါ။ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဒီမှာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီလိုတိုက်လို့ မရတော့ဘူးဆိုတာ ကျနော်က ပြချင်တာ။ လက်နက်ကိုင်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီပြင်နည်းနဲ့ တိုက်လို့ရတယ်။ မီဒီယာရဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ့။ မီဒီယာဆိုတာကလဲ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ကြတာ။ ခင်ဗျားက ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ပြရင် မီဒီယာက ခင်ဗျားဆီ ရောက်လာမှာပဲ”
“ ကျနော်က သူတို့အဖွဲ့ကိုတောင် မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်က တယောက်ထဲ အမြဲပြေးနေတာ။ ကျနော့်ဟာတွေ ကို တချို့က လိုက်မမီဘူးဗျ။ ကျနော်က ဒီမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို တန်းတူပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိတယ်။ ဗမာတွေနဲ့ ပြောရတဲ့အချိန်မှာ အရမ်း အဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဗျူရိုကရက်တွေ များတယ်ဗျာ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေ။ ကျနော်တို့မှာ အချိန် အဲလောက်မရှိတော့ဘူးဗျ”
“ဒါက ပြောလို့မရဘူး။ ဇာတ်လမ်းပြီးမှ ကြည့်ဆိုတာ အဲဒါပဲ။
ကျနော့်ရဲ့ဦးတည်ချက်က ICC ရောက်ရင် အောင်မြင်တယ်
ပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာ ကျနော့်ကို နားမလည်တဲ့ လူတွေက
ပြဿနာရှာတယ်။ ဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေက ဖုန်းတွေ ဆက်တယ်။ နောက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသား လွှတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဘာတို့က ကန့်ကွက်တယ်။ သူတို့
က ကျနော့်ကို မယုံဘူး။ အရေးယူဖို့ အစိုးရက မယုံဘူး။ ဒီလူဟာ အပြစ်ရှိခဲ့တဲ့လူတ ယောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ငါတို့
ကို လာလိမ်နေတာလားမသိဘူး။ နောက်တချက်ကလဲ အရမ်းအကြီးကြီးတွေ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တာကိုး။ ကျနော့် မှာက အမကိုလည်း ထောင်ချတယ်။ အမေကိုလည်း ထောင်ချတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း
ထောင်ကျခဲ့တယ်။ ပေးဆပ်ခဲ့တာလည်း ရှိတယ်။ သိပ်ပြောလို့ မကောင်းဘူးနော်။ အဲဒါလောက်ကို မြင်စေချင်တယ်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်လေးကို support လုပ်ပေးပါ။ အဲဒီကိုရောက်သွားရင် အကောင်ကြီးတွေနဲ့ စကားပြောတော့မယ်။ ဗမာပြည်ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ ဘာမှ အက်ရှင် မပါပဲနဲ့ အချိန်တွေဖြုန်းနေတာ”
“ ကျနော်က သူတို့အဖွဲ့ကိုတောင် မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်က တယောက်ထဲ အမြဲပြေးနေတာ။ ကျနော့်ဟာတွေ ကို တချို့က လိုက်မမီဘူးဗျ။ ကျနော်က ဒီမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို တန်းတူပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိတယ်။ ဗမာတွေနဲ့ ပြောရတဲ့အချိန်မှာ အရမ်း အဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဗျူရိုကရက်တွေ များတယ်ဗျာ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေ။ ကျနော်တို့မှာ အချိန် အဲလောက်မရှိတော့ဘူးဗျ”
“ဆုတွေကတော့ ရတယ်ဗျာ။ ကျနော့်နံရံမှာ ဆုတွေကတော့ ပြည့်နေတာပဲ။ ၁၅ဝဝ၊ ၆ဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ အဲလိုမျိုး ရထားတာ”
“ရောက်ခါစကတော့ စာမတတ်တော့ ဂရေးဟွန်းမှာ အလုပ် ဝင်လုပ်တယ်။ စာတတ်တော့ ပန်းချီဆွဲတယ်ပေါ့။ အလုပ်တွေ တော်တော်များများ လုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်။ Kevin Rudd ဗမာပြည်သွားဖို့လည်း ကျနော် လုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။ ကျနော်ဒီမှာ လော်ဘီလုပ်ထားတာ အများကြီးပဲ။ သတင်းစာတွေထဲမှာ ဗမာပြည်မသွားရင် မင်းငါ့ကို လိမ်တာပဲဆိုတဲ့အထိ ကျနော်က ပြောထားတယ်။ အတိုက်အခံဖြစ်နေတုန်းက မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့တုန်းက
မင်းငါ့ကို ဗမာပြည်သွားမယ်ဆိုပြီး ကတိပေးခဲ့တယ်။ မင်း ဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ မသွားဘူးလို့ သတင်းစာမှာ ထုတ်တော့ သိပ်မကြာဘူး။ သူ သွားရတယ်။ တချို့တွေက မသိဘူး။ ကျနော်က အစိုးရက လူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် လုပ်နေတာ။ ခုကိစ္စလည်း လူတော်တော်များများက လိုက်မီမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် တောင်းပန်တယ်။ ပွဲပြီးတဲ့အထိ ကြည့်ပါ။ ခုတော့ လူယုတ်မာ၊ သစ္စာဖောက်ပေါ့။ လူသတ်သမားပေါ့”
“ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော် အရမ်းစကားပြောချင်တယ်။ ဖြတ်လမ်းက ကျနော်က တက်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြီးနဲ့ တက်တယ်ဆိုတော့ မရဘူး။ ဒုက္ခသည်တယောက်ကို ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ စကားမပြောဘူး။ သူတို့ကို တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် ဖြတ်လမ်းက တက်ဖို့လိုတယ်”
“မမေးနဲ့တော့ဗျာ။ အဲလောက်ဆို ခင်ဗျား သဘောပေါက်ပြီ။ အားလုံးက ကျောင်းသား
တွေပါပဲ။ ကျနော် အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်ကို သွားမယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊ လူသတ်ခဲ့တယ်ဘာညာ ဆိုတာကလည်း ကျနော့်ရဲ့ စတိုရီပေါ့။ ဒါပေမယ့် စတိုရီဆိုတာက စတိုရီပဲဖြစ်တယ်။ ထရူးစတိုရီက သပ်သပ်။ စတိုရီက သပ်သပ်”
“မမေးနဲ့တော့ဗျာ။ အဲလောက်ဆို ခင်ဗျား သဘောပေါက်ပြီ။ အားလုံးက ကျောင်းသားတွေပါပဲ။ ကျနော် အလုပ်လုပ်နေ
တယ်။ ကျနော့်ပန်းတိုင်ကို သွားမယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊ လူသတ်ခဲ့တယ်ဘာညာ ဆိုတာကလည်း ကျနော့်ရဲ့ စတိုရီ
ပေါ့။ ဒါပေမယ့် စတိုရီဆိုတာက စတိုရီပဲဖြစ်တယ်။
ထရူးစတိုရီက သပ်သပ်။ စတိုရီက သပ်သပ်”
“ကျနော်က ထောင်တွေထဲမှာ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်၊ အရိုက်ခံထားရတာကိုး။ သာယာဝတီထောင်ထဲမှာ ကျနော် မရောက်ဖူးတဲ့တိုက်ခန်း မရှိဘူး။ သြစတြေးလျရောက်မှ စိတ်ကျရောဂါရတယ်။ အပြင်းအထန်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တခါတလေ အိပ်ဆေးလေးဘာလေး သောက်တယ်။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးမှု Counselling တွေ သွားတွေ့တယ်။ ကျနော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်သညာ memory တွေ ရှိခဲ့တာကိုး။ ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လိုင်းတွေက အရမ်းမြင့်မားတော့ ဒီအမှတ်သညာတွေကို ပျောက်သွားစေချင်တယ်”
“ခုထက်ထိပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုက mentally fit ဖြစ်နေပြီလေ။ ဒါကြောင့် ဒါတွေ လုပ်နိုင်တာပေါ့။ ဦးနှောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကောင်းလို့ ပန်းချီတွေ ဆွဲတယ်၊ ဆုတွေ ရတယ်။ အရူးတယောက်ကို ဆုမပေးဘူးဗျ။ အရူးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ စိတ်ကျရောဂါတော့ ရှိတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်။ ဒီနိုင်ငံက ပရီမီယာတွေတောင် ရှိတာ။ သူတို့ ထုတ်ပြောတယ်လေ။ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ရူးတာနဲ့ မတူဘူးဗျ။ ရူးတာက လုံးဝရူးသွားတာ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျနော့်တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းစိုးရိမ်တယ်”
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဆင်ဝင်အောက်မှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်လေးအချို့ မိုးခိုပြီး TV ကော်ဗူးများကို မူးယစ်ဆေးအနေဖြင့် ရှူနေကြသည်ကို ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ မြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံလေးပါအရင်ထောင်တွေထဲမှာဘဲသုံးကြတာပါ။
Nyo Gyi Face Book
၂၀၁၁ မန်းကျောက်ဝိုင်း တရုတ်-ဗမာ အရေးအခင်း (မန်း)
၂၀၁၁၊ ဇွန် ၂၇ ရက်နေ့က မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်-ဗမာ ရန်ပွဲကစတဲ့ အရေးအခင်းဗီဒီယိုဖိုင်ပါ။
ဧည့်ဗီဇာနဲ့ တရုတ်ပြည်သား တရုတ်ကျောက်သမားငါးယောက်နဲ့ ဗမာကျောက်သမားတစ်ယောက် ကျောက်ရောင်း/၀ယ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချင်းများရာက တစ်ယောက်သောဗမာ ခံရရာ တရားခံ တရုတ်များကို ဗမာများစွာ ၀န်းရံထားပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်း ၀ိုင်းဆိုကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
နောက်သိရတာက အဲဒီတရုတ်များကို တရုတ်သံရုံးဆီ ပြန်အပ်လိုက်ရပြီး အဲဒီတရုတ်တွေကို တရုတ်ပြည်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
၆၄နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ သဘာပတိ ဦးတင်ဦးမိန့်ခွန်း
U Tin Oo..Open Speek....mp3
6412K Play Download
၆၄နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်း
Daw Aung San Suu Kyi..Speek...mp3
8474K Play Download
Chairman's speech p1-E.jpg
667K View Download
Chairman's speech p2-E.jpg
Statement 13-7-11 p1-E.jpg
707K View Download
Statement 13-7-11 P2-E.jpg
PLEASE JOIN US TO WELCOME TWO CYCLISTS
Welcome and Support two cyclists to help displaced Burmese Refugees
Rod Germaine and Soe Naing from Vancouver area are cycling across Canada to raise awareness and funds - for help deliver health care for displaced Burmese refugee on the Thai-Burma border.
They will contribute the funds to the Just Aid Foundation (websites: www.justaid.ca and www.justride2011.com) to support the Mae Tao Clinic at Thai Burma border inside Thailand, who provides health care services to the displaced Burmese and the Back Pack Health Worker Team program, which is based out of the Mae Tao Clinic. It is founded by 2003 Time Magazine’s Asian Heroes and Canada’s John Humphrey Freedom award winner Dr. Cynthia Maung.Rod, whose day job isalabour arbitrator, and Soe Naing, who works in the IT department of Kwantlen College, BC started their journey from Vancouver and will be arriving Toronto on Friday July 22, 2011 after 50 days of cycling across Canada.
AND PROVIDE OUR SUPPORT
Time: Friday July 22 at 7:00 PM
Place: MotherHome Restaurant
1194 Bloor Street West, Toronto, M6H1N2, (416) 792-2593
between Lansdowne and Dafferin Subway station.
Ticket: $20 (include meal. Gratuities not include)
If you want additional information please Contact to..
U Aung Tin (647) 343-7871
U Zaw Zaw (416) 735-4128
U Si Thu (416) 230-0901
All proceeds will go to the Just Aid Foundation to support the Mae Tao Clinic and the Back Pack Health Worker Team Program.